पोले वडा नम्बर ३३ लामगादीमा व्यवसायिक रुपमा जंगली कालिज पालिँदै | Jukson
पोले वडा नम्बर ३३ लामगादीमा व्यवसायिक रुपमा जंगली कालिज पालिँदै
पोखरा, २४ असोज
पोखरा लेखनाथ वडा नं. ३३ लामगादीमा व्यवसायिक रुपमा जंगली कालिज पालन सुरु गरिएको छ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर १४ खाल्टेमसिना घर भई २३ वर्षदेखी बेल्जियम बस्दै आएका पदम अधिकारी र उनको भाञ्जा सोमनाथ लामिछानेले संयुक्त रुपमा कालिजको व्यवसायीक पालन सुरु गरेका हुन् । अधिकारी र लामिछाने नाताले मामा भाञ्जा हुन् । उनीहरुले पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर ३३ लामगादीमा नेपाल वाइल्ड फूड प्रोडक्ट प्रालि खोलेर कालिज व्यवसायिक रुपमै उत्पादन सुरु गरेका छन् । १ करोड खर्च भइसकेको यस र्फममा मामा अधिकारीको ८० प्रतिशत लगानी छ भने भाञ्जा लामिछानेको २० प्रतिशत लगानी छ ।
२ वर्ष अघि थालिएको कालिज उत्पादन अहिले फैलिँदै गएको छ । बेल्जियममा सेफ भएर काम गर्ने क्रममा उनले व्यवसायिक कालिजपालन देखेका थिए । उनले त्यहीँ आफैंले खानका लागि छुट्टै पाल्ने गरेका उनले स्वदेश जन्मथलो आएर यसको व्यवसायिक उत्पादन गर्ने सपना देखे । त्यही सपना पूरा गर्न उनी जन्मथलो पोखरा आए र आफ्नै दिदीको छोरा अर्थात भाञ्जालाई राखेर कालिज पालन सुरु गरे । अधिकारी अझै पनि बेला(बेला बेल्जियम जान्छन् । उनी बेल्जियमको एक रेष्टुरेण्टका सेफ हुन् । उनी केहि वर्षमै रिटायर्ड हुने क्रममा छन् ।
त्यहाँ निजी कम्पनीमा काम गरेपनि रिटायर्ड भएपछि पेन्सन आउने ब्यवस्था रहेको बताइन्छ । वर्षमा २ महिना बेल्जियम बस्ने गरेका उनको श्रीमती र छोराहरुले भने बेल्जियमको ब्रुज सहरमा जय गोर्खा किचन सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनी भने रिटायर्ड लाइफ जन्मथलो पोखरामै बिताउने र व्यवसायिक कालिज पालन गर्ने उद्देश्यले आएका हुन् । २३ वषर््ीाय उनका भाञ्जा लामिछानेले भने लेखनाथको गगनगौंडामा गगनगौंडा भेटेरीनरी सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सुरुमा १ हजार २ सय अण्डा ल्याएर काठमाडौंको एक हृयाचरीमा चल्ला उत्पादन गर्न दिएका उनले त्यसलाई पोखरामा परीक्षणको रुपमा पाल्न सुरु गरे ।
पहिलो उत्पादन राम्रो भएपछि उनले हाल आफैंले २ वटा ह्याचरी मेसिन ल्याएर चल्ला पनि आफैंले उत्पादन गर्ने गरेका छन् । यद्यपी हाल ल्याइएको उक्त मेसिन सानो भएकाले एक पटकमा १र१ सय वटा चल्ला मात्र उत्पादन गर्न मिल्छ । अब त्यसलाई बढाएर एक पटकमा ४र४ हजार उत्पादन गर्न मिल्ने हृयाचरी मेसिन ल्याउने तयारीमा छन् उनीहरु । ३ वर्षमा २ लाख ५० हजार कालिज उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर काम गरिरहेका उनीहरुले हाल करिब १ हजार ५ सय कालिज खान लायक बनाएका छन् । १९ रोपनी जग्गा वर्षको २ लाख तिर्ने शर्तमा लिजमा लिएर काम गर्न शुरु गरेका उनीहरुले चाँडै नै जंगलको नजिक उपयुक्त खुल्ला ठाउँ लिएर ठूलो मात्रामा कालिज उत्पादन गर्ने सञ्चालक अधिकारीले बताए ।
कालिजलाई कहीँबाट पनि भाग्न नसक्ने गरी तारजाली लगाएर केज बनाउनुपर्छ । सुरुमा चल्ला उत्पादन गर्ने वित्तिकै राख्ने केज बनाउनुपर्छ भने एक महिनाको भएपछि सार्नुपर्छ । यसरी ३र४ वटा केज परिवर्तन गरेपछि मात्र खान लायकको कालिज बन्छ । करिब ६ महिनामा खान लायक बन्ने कालिज सरदर डेढ किलोसम्मको हुने अधिकारीले बताए । कालिजका भाले र पोथीलाई छुट्टाछुट्टै राख्ने गरिन्छ । भाले कालिज जसको घाँटीमा सेतो र अन्य भाग रातो हुन्छ । पोथी कालिज खैरो रंगको हुन्छ । अण्डा पार्ने समयमा पोथी भएको ठाउँमा भाले लगेर छाड्ने गरिन्छ । एउटा पोथीले ५० देखि ६० दिनसम्म अण्डा दिन्छ । त्यसमा कुनैले दैनिक अण्डा पार्छ भने कुनैले दिन बिराएर ।
कालिजको दाना मकै, गहुँ, कमलो खालको घाँस र सागपात हो । यद्यपी ब्रोइलर कुखुरालाई दिइने दाना पनि कालिजका लागि खुवाउन सकिन्छ । तर, मकै, गहुँ वा सागपात खुवाएमा कालिजमा लोकल स्वाद आउँछ । कालिज स्वादिलो हुनुका साथै स्वस्थकर पनि हुने अधिकारीको दाबी छ । शरीरलाई चाहिने प्रोटिनको मात्रा पर्याप्त हुने भएकाले यसको मासु स्वस्थकर र लाभदायक मानिन्छ । गर्मीमा भन्दा जाडोमा खानु उपयुक्त हुने कालिजको मासु सुत्केरीको लागि अत्यन्त लाभदायक हुने उनले बताए । बोसो अत्यन्त न्यून मात्र हुने भएकाले कालिजको मासु स्वस्थकर सञ्चालक बताउँछन् । एउटा कालिजको मूल्य ३ हजार रुपैयाँ पर्छ । फार्म भएकै ठाउँमा काटेर खाने ब्यवस्था पनि गरिएको छ । यद्यपी रेष्टुरेण्ट नै सञ्चालन भने गरिएको छैन ।
पकाएको एउटा कालिजको मासुको मूल्य भने ३ हजार ५ सय तोकिएको अधिकारीले जानकारी दिए । मामा(भाञ्जाले निकट भविष्यमै लेकसाइडमा कालिज रेष्टुरेण्ट खोल्ने लक्ष्य राखेका छन् । कालिजको मासुको स्वाद मन पराउने पर्यटकलाई लक्षित गरेर ३ वर्ष भित्रमा लेकसाइडमा रेष्टुरेण्ट खोल्ने अधिकारीले बताए । नेपालको वन जंगलमा कालिज हुने भएपनि यसलाई मारेर खान भने पाईंदैन । यदि कसैले जंगलको कालिज मारेको पाइएमा वन्यजन्तु चोरी शिकारी ऐनअनुसार कारवाही हुन्छ । नेपालीको कालिज खाने चाहना पूरा गर्न आफूले व्यवसायिक रुपमै कालिज उत्पादन गर्न सुरु गरेको अधिकारीले बताए । कालिज पाल्नका लागि र्फम नै दर्ता गरेर काम गरेपनि किनेर लैजानेलाई भने प्रशासनले दुःख दिने हुन् कि भन्ने उनलाई चिन्ता उनीहरुमा छ । कालिज बेच्दा भ्याट बिल नै दिइने भएकाले समस्या नहुने विश्वास उनीहरुको छ ।
बाँकेमा बस दुर्घटना हुँदा तीनको मृत्यु, १२ घाइते
यस वर्षको एसएलसीमा लेखेका विद्यार्थीहरुका उत्तरहरु, जुन मर्ने धम्कीदेखि कवितासम्म !
पोलेमा मतगणना जारी, १७ सय मत गन्दा एमालेको अग्रता कायमै ( अपडेट )
आयो पुरुषका लागि गर्भनिरोधक सुइ, एक पटक लगाएपछि वर्षदिनलाई ढुक्क